Shina H Beam baoritra rafitry ny motera baomba fanamboarana sy famokarana | Ding Tai
Mamatsy vy vita amin'ny vy vita amin'ny Q69 ho an'ny fanadiovana takelaka
1. Tsipika fitehirizana ny rindrina Plateaux:
Azontsika atao ny mamolavola sy manamboatra andalana samy hafaingam-piramandrana varahina araka ny takian'ny mpanjifa. Azafady alefaso amin'ny mailaka izahay.
Ity karazana vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy sy ny milina coating ity dia novolavolaina sy novokarina tamin'ny alàlan'ny fanekena ny tombotsoan'ny vokatra mitovitovy amin'ny any ivelany na any ivelany. Ny ampahany amin'ny fanadiovana (fanadiovana basy) dia manamboatra kodiarana fipoahana avo lenta ary feno karazana fandroahana mitifitra. Ilay milina famelana dia manamboatra manokana ny boribory mihetsika mahery vaika sy ny ventilator avo lenta. Ny fizarana fanafana sy ny fanamasinana dia mety handray ny fomba fanafana isan-karazany. Ny ampahany manaparitaka ny loko dia mampihatra ny fomba fanenanana ny tsindry avo lenta. Ny fitaovana feno dia fehezin'ny PLC, ary fitaovana lehibe feno an'ny fandrosoana iraisam-pirenena.
Ity milina fipoahana fitifirana sy tsipika hosodoko ity dia ampiasaina indrindra amin'ny fitsaboana any ivelany (ny fanaingoana, ny fanesorana ny varahina, ny famafazana ny sary ary ny fanamaina) ny vilia vy sy ny fizarana ara-drafitra isan-karazany, ary koa ny fanadiovana sy fanamafisana ireo singa mandrafitra vy.
Ity milina ity dia ampiasaina betsaka ao amin'ny Shipyard, indostria fananganana sambo, indostria milina, sns.
Ireo maodely sy famaritana ny fantsom-bolongana miorim-bolo amin'ny fanadiovana:
Ny singa mandrafitra
Mahazo entana mavesatra
Ny fahefana manontolo
Inona ny serivisy Antai azo omena?
1. Ny injeniera dia afaka miasa misimisy araka ny fepetra takian'ny klioba amin'ny fitaovana. ary mandefa fanamafisana ho an'ny mpanjifa hanampiana ny mpanjifa hamonjy vidiny.
2. Mandritra ny fanamboarana ny fitaovana dia maka sary ny fivoaran'ny famokarana vokatra izahay, ary alefa any amin'ny mpanjifa mba hizaha ny fivoarana.
3. Ny volon-doko dia mandefa ireo antontan-taratasy tany am-boalohany ho an'ny mpanjifa (toy ny lisitra fonosana, volavolan-dalàna, CO, Forma, Form A, Form F, Form M, B / L sns).
4. Azontsika atao ny manome ny mpanjifa amin'ny fanoratana fototra Anglisy maimaim-poana, sary fametrahana, torolàlana, boky fitehirizana ary sary hoso-doko.
5. Azontsika atao ny mandefa ny injeniera amin'ny fametrahana sy ny debugging any ivelany, ary ny fampiofanana maimaimpoana ny mpandraharaha sy ny mpiasa fikojakojana.
6. Manana rafitra serivisy serivisy aorian'ny varotra izahay, halefa any amin'ny mpanjifa tsirairay ny ID iray, afaka miditra ao anatin'ity rafitra ity izy ireo izay mijery ny fampahalalana rehetra hividianana fitaovana sy ampahany aminy. Manome consultation online 24 ora izahay.
1. Andro firy no ilanao mamoaka ity milina ity?
Io milina manokana io dia arakaraka ny zavatra takinao manokana. Manomboka amin'ny injeniera ka hatramin'ny fahavitan'ny famokarana dia mila 45-50 andro eo ho eo.
2. Inona no ataon'ny orinasao momba ny fanaraha-maso kalitao?
Izahay dia manome lanjany lehibe kokoa amin'ny fifehezana kalitao hatrany amin'ny fangatahana hatramin'ny faran'ny famokarana. Ny milina tsirairay dia hangonina tanteraka ary hizaha toetra tsara alohan'ny fandefasana azy.
3. Inona no antoka momba ny kalitao?
Herintaona ny fotoana miantoka ny kalitao dia misafidy ireo singa marika malaza eran-tany isika mba hitazomana ny milina ho lavorary.
4. Mahavita manome ny fametrahana sy ny vaomiera any ivelany ve ianao? Haharitra hafiriana izany?
YES, manome serivisy any ivelany izahay fa ny mpanjifa dia mila mandoa ny tapakilan'ny sidina injeniera sy ny sakafo hotel.
Ny milina kely dia matetika maharitra 5 andro.
Matetika 20 andro eo ho eo ny milina lehibe.
5. Ahoana no ahafahako matoky anao handefa ny milina mety araka ny baikoko?
Hanolotra milina tsara kalitao tokoa izahay rehefa nifanakalozan-kevitra sy nanamafy ny filaharana. Ny fototry ny kolontsainan'ny orinasa dia ny fanavaozana, kalitao ary ny fahombiazana. Antai dia mpamatsy ALIBABA's Golden mpamatsy amin'ny fanombanana BV & TUV. Azonao atao ny manamarina miaraka amin'ny ALIBABA, mbola tsy nahazo fitarainana avy amin'ny mpanjifanay mihitsy.
RAHA MBOLA AZO DIA TOKOA, PLS CHECK OOMPOORA FOMANANA ORA KORONDRANA.
Previous: Turbines fanatanjahantena avo lenta avo lenta
Manaraka: Milina fanapoahana fasika fanatanjahantena mahazatra
H miendrika basy mitifitra, tifitra Peening Machine, nitifitra fatratra Spare Parts, Kodiarana fanapoahana tifitra, Masinina fipoahana baomba, Fanapoahana tsiro, Ny vokatra rehetra